तपाइँको वेब डिजाइन मा धेरै खर्च नगर्नुहोस् Martech Zone
तपाईंको वेब डिजाइनमा धेरै खर्च नगर्नुहोस्
शनिबार, जुलाई २१, २०१। बिहीबार, जुन 29, 2017 Douglas Karr
मेरा धेरैजसो साथीहरू वेब डिजाइनरहरू हुन् - र म आशा गर्दछु कि तिनीहरू यो पोष्टमा अप्ठ्यारोमा पर्दैनन्। पहिले, मलाई भन्नुहोस् कि महान वेब डिजाइनले तपाईलाई आकर्षित गर्ने ग्राहकहरूको प्रकारमा ठूलो असर पार्न सक्छ, सम्भावितताको प्रतिक्रिया दरहरू मार्फत क्लिक गर्दै, साथ साथै तपाईंको कम्पनीको कुल राजस्व।
यदि तपाईंलाई विश्वास छ कि एक महान उत्पादन वा उत्कृष्ट सामग्रीले कमजोर डिजाइनलाई जित्न सक्दछ, तपाईं गलत हुनुहुन्छ। को महान डिजाइनहरूमा लगानी फिर्ता धेरै भन्दा धेरै प्रमाणित भएको छ। यो समय र खर्चको लागि बिलकुलै मूल्यवान छ।
त्यो भनियो ... महान डिजाईनले तपाईलाई यति खर्च गर्नु पर्दैन, यद्यपि। आधुनिक वेब सामग्री प्रबंधन प्रणालीहरू जस्तै WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (वाणिज्य को लागी), अभिव्यक्ति ईन्जिन, इत्यादि सबैसँग विस्तृत थर्मि eng ईन्जिनहरू छन्। त्यहाँ धेरै वेब डिजाइन फ्रेमवर्कहरू पनि छन्, जस्तै YUI ग्रिडहरू CSS, स्क्र्याचबाट बनेका साइटहरूका लागि।
यी प्रणालीहरूको उपयोगको फाइदा यो तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ धेरै बचत गर्नुहोस् तपाईंको वेब र ग्राफिक डिजाइनरको समय को। व्यावसायिक वेब डिजाइनहरू $ २ .०० देखि $ १०,००० (वा अधिक पोर्टफोलियो र एजेन्सीको सन्दर्भमा अधिक निर्भर गर्दछ) खर्च हुन सक्दछ। त्यो समय धेरै पृष्ठ लेआउट र CSS विकासमा खर्च हुन सक्छ।
लेआउट र CSS को लागि भुक्तान गर्नुको सट्टा, किन पहिले नै निर्माण गरिएको हजारौं थिमहरू मध्येबाट छनौट नगर्नुहोस् र केवल तपाईंको ग्राफिक कलाकारको काम गर्नुहोस् ग्राफिकल डिजाइन? फोटोशप वा इलस्ट्रेटरमा निर्मित उत्कृष्ट डिजाइन तोड्न र यसलाई अवस्थित थिममा लागू गर्दा स्क्र्याचबाट सबै डिजाईन गर्नु भन्दा केही अंश लिन्छ।
यस दृष्टिकोणको प्रयोगको अतिरिक्त फाइदा भनेको लेआउटले खोज इञ्जिन अनुकूलन र उपयोगितामा असर गर्न सक्छ - केही यस्तो कि विषयवस्तु विकासकर्ताहरूले सामान्यतया सतर्क रहन्छन् उनीहरू थिमहरू अनलाइन प्रकाशित र बेच्न अघि। किनकि मेरो धेरै पाठकहरू वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरू हुन्, यसका लागि म मनपराउने साइटहरू मध्ये एक WooThemes हो। जुमलाका लागि रकेट थीमहरू एक राम्रो चयन छ।
सल्लाहको एक अतिरिक्त टुक्रा, जब तपाईं सदस्यता वा खरीद यी थिमहरू - विकासकर्ता इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्। WooThemes मा विकासकर्ता इजाजतपत्र लागत भन्दा दोब्बर छ (अझै only १ at० मा मात्र सुरू हुन्छ!)। यसले तपाईंलाई वास्तविक फोटोशप फाईल प्रदान गर्दछ तपाईंको ग्राफिक कलाकारलाई डिजाइन गर्नको लागि प्रदान गर्न!
टैग: DjangoDrupalअभिव्यक्ति ईन्जिनJoomlamagentoरॉकेटथिमहरूWordPressयाहू यूआईyui ग्रिड CSS
एक नदी को रूप मा तपाइँको व्यापार र मार्केटिंग
मार्केटिंग रियल इस्टेट अनलाइन विकसित भएको छ
मलाई CSS टेम्प्लेटहरू मनपर्छ http://www.webassist.com। धेरै नि: शुल्क छन्, तर त्यहाँ थोरै शुल्कको लागि अन्य धेरै छन्।
जुलाई,, २०१ at 7::2009। बिहान
कहिलेकाहीँ वेबमास्टरहरूले पाङ्ग्रा पुन: सिर्जना गर्ने समय कति छ भनेर गणना गर्दैनन्। टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्दै र थिमहरू जानको लागि तयार हुनु एक उत्कृष्ट र कहिलेकाहीँ नि: शुल्क अवसर हो। बस यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्!
महान पोस्ट। थप अपडेटको लागि फिर्ता आउनेछ।
जुलाई,, २०१ at 8::2009। बिहान
म यसमा पूर्ण सहमत छु। डिजाइनमा आधारित कम्पनीको रूपमा हामी वेबसाइट डिजाइनको मूल्य सकेसम्म सस्तो बनाउन विषयवस्तुहरू साथै अनुकूलन कोड प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौं।
जुलाई,, २०१ at 10::2009। बिहान
मलाई लाग्छ कि यो कुन कम्पनीको लागि साइट डिजाइन गरिएको छ मा निर्भर गर्दछ।
म सहमत छु कि त्यहाँ धेरै उत्कृष्ट टेम्प्लेटहरू छन् जसले सस्तोमा राम्रो देखिने वेबसाइट बनाउन सम्भव बनाउन सक्छ। हेक, मेरो आफ्नै ब्लग 100% टेम्प्लेट हो र मलाई यो मन पर्छ!
यद्यपि, टेम्प्लेटले सधैं ठूलो, अधिक विशेष कम्पनी वा टेम्प्लेट साइटले सम्बोधन नगर्न सक्ने विशेष आवश्यकताहरूको लागि काम नगर्न सक्छ।
स्वाभाविक रूपमा, मेरो एजेन्सीले "महंगा" अनुकूलन डिजाइन गरिएका वेबसाइटहरू सिर्जना गर्ने भएकोले म पक्षपाती छु 🙂
यद्यपि, हामीले विगतमा हाम्रा ग्राहकहरूका लागि टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं र धेरै जसो समय, तिनीहरू यसलाई ट्वीक गर्न, यसलाई परिवर्तन गर्न, र "यसलाई अद्वितीय बनाउन" चाहन्छन् र यो जसरी पनि अनुकूलन डिजाइनको रूपमा समाप्त हुन्छ।
थप रूपमा, हामी कम्पनीको ब्रान्ड वेबसाइटको डिजाइनमा ठीकसँग प्रतिबिम्बित भएको सुनिश्चित गर्नको लागि ठूलो ख्याल राख्छौं। टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्दा यो सजिलै पूरा हुँदैन।
अन्तमा, हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरूले उनीहरूको साइटमा विशेष वेब अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दैछन् जस्तै घटना दर्ता, जटिल उत्पादन क्याटलगहरू, र अभियानहरू व्यवस्थापन गर्न मार्केटिङ उपकरणहरू। यस प्रकारका कम्पनीहरूमा मार्केटिङ विभागहरू अवस्थित कम्पनी ब्रान्डको सिमलेस एक्सटेन्सन हो कि वेबसाइट डिजाइन गर्न हामीमा निर्भर छन्। यी कम्पोनेन्टहरू निर्बाध रूपमा एकीकृत छन् भनी सुनिश्चित गर्न यस जस्ता साइटहरूलाई शिल्प कौशल र पोलिश आवश्यक पर्दछ र मलाई लाग्दैन कि एउटा टेम्प्लेट यी केसहरूमा सन्तुष्ट हुनेछ।
सबैको लागि एक "महंगा" अनुकूलन साइट छ? होइन। यद्यपि, आफ्नो ग्राहकलाई चिन्न निश्चित हुनुहोस्। कहिलेकाहीँ एक टेम्प्लेट राम्रो छ। अन्य समयमा, कम्पनीको ब्रान्डलाई ठीकसँग प्रतिबिम्बित गर्ने अद्वितीय साइट बनाउनको लागि यो अतिरिक्त समय र लगानीको लायक छ।